Imikhiqizo Engcono Kakhulu Yezandiso Zezinwele Ezigobile (Sibungaza Am – SL Raw Virgin Hair LLC.
Imikhiqizo Engcono Kakhulu Yezandiso Zezinwele Ezigobile (Sibungaza Amabhizinisi Aphethwe Abamnyama)
Aug 03, 2020 | SL Raw Virgin Hair
Manje njengoba usuzitholele amaluki akho, izinwele ezilukiwe, nezinqwaba zezinwele eziluhlaza, sekuyisikhathi sokuthi ufunde ukuthi uzinakekela kanjani. Ukunakekela izandiso zezinwele ezigobile kuqala ngokuba nemikhiqizo yezinwele efanele.
Ukunakekela izandiso zezinwele ezigoqekile kufana nokunakekela izinwele zakho zemvelo noma ezilukiwe. Udinga ukwenza lokhu:
Nge-SL Raw Virgin Hair, lezi izinwele zomuntu ezingu-100%. Ngakho-ke, imikhiqizo evela emabhizinisini ethu aphethwe ngabamnyama ilungele ukukusiza ukuthi unakekele izandiso zakho ezi-curly. Naba odadewethu abamnyama aba-5.
5 Imikhiqizo Yezandiso Zezinwele Ezigobile
Lawa amabhrendi angu-5 kuphela aphethwe abantu abamnyama eshalofini lomkhiqizo wethu ekhaya nasesaluni. Sinezinye eziningi.
Ezi-5 esizikhethele okuthunyelwe kwanamuhla zonke zinemigqa egcwele yemikhiqizo ehlanganisa zonke izici zokunakekelwa kwezinwele okungokwemvelo nokuthungwe. Ngakho-ke, unganamathela emgqeni noma uwuxube. Bese ushiya amazwana ngezansi mayelana nokuthi yimuphi umkhiqizo wezinwele ezimnyama owuncamelayo ukuze unakekele izandiso zakho zezinwele ezisontekile.
Ukugcina izandiso zakho ezigoqekile ziswakeme kuyisidingo sokuphila isikhathi eside. Imikhiqizo yeCamille Rose yakhelwe ukugcwalisa izinwele ezigoqene. Isungulwe nguJanell Stephens, lolu hlobo lwezinwele eziphethwe ngabantu abamnyama luhlinzeka ngezinhlobonhlobo zemikhiqizo etholakala kalula ezitolo naku-inthanethi. Zama Iqoqo Lesiginesha ukuze uvimbele izandiso zakho ekubeni zifiphaze futhi zibe buthuntu.
Thank God It's Natural (TGIN) enye ibhrendi ephethwe ngabamnyama enhle yezandiso zemvelo ezigoqekile ezingu-100%. Yasungulwa nguChris-Tia Donaldson, lo mugqa wezinwele ufinyeleleka kalula futhi uqhosha ngayo yonke imikhiqizo ye-shampoo, conditioning, kanye nesitayela ozoyidinga ukuze ugcine izandiso zakho zesikhathi eside. Imikhiqizo inomswakama, futhi i-twist and define creme ilungele ukuchazwa kwama-curl.
Yaziwa ngemikhiqizo yayo yemvelo eqinisekisiwe, i-CURLS iwungqondongqondo ka-Mahisha Dellinger. Umugqa womkhiqizo wezinwele ezisontekile ulungele ukugcina izandiso zakho ezigoqekile zihlanzekile. Zama i-Blueberry Bliss Styling Bundle ukuze ulungise, ubuyisele, futhi ubeke ama-tresses akho (emvelo nezandiso).
U-Rochelle Graham-Campbell usungule i-L.O.C. indlela esithanda ukuyisebenzisa nokuthi imikhiqizo yakhe ye-Alikay Naturals ingasebenzela izinwele zakho izimanga. I-Alikay imayelana nohlelo lokunakekelwa kwezinwele olunempilo futhi okufanele ube nalo lwezinqwaba zakho, ama-weave, nezandiso zezinwele. Ngakho-ke, uma unama-curl aqinile noma axegayo asuka ku-SL Raw Virgin Hair, ulayini we-Alikay uzokusiza ukuthi uwagcine ephuma.
Ukusondeza imikhiqizo yethu emi-5 yezandiso zezinwele ezigoqekile yi-Eden Bodyworks. Lolu hlobo luka-Jasmine Lawrence lunomugqa omuhle wemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba esingadambisa noma yikuphi ukulunywa ongase ube nakho ngokugqoka izandiso zakho zezinwele ezigoqekile. I-Shea Leave-In Conditioner yabo ilungele ukunakekelwa ngemva kokuwashwa.
I-Wrap Life ingolunye uhlobo lwezinwele zabamnyama olusungulwe ngu-Nnenna Stella. Esikhundleni semikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele, banikeza ukugoqa kwekhanda okuhle ukwenza isitayela izandiso zakho ezigobile noma uzivikele.
Manje, lezi ezimbalwa kwezinhlobo eziningi zabamnyama esizithandayo ngokunakekela izinwele Ngakho-ke, sitshele kumazwana, yiziphi izinhlobo othanda ukuzisebenzisa, futhi sizokwazisa uma nazo emashalofini ethu.
Beauty bloggerblack hair care productsblack owned hair productscurly hairhair tipshaircareinstyleproduct recommendationsproducts for curly hairSL Raw Virgin Hairwomen owned businesses